Wararka - Aina Laydh waxay dhistay Xafiiska Beijing Sebtember 16th, 2019.
Aina Laydh waxay dhistay Xafiiska Beijing Sebtember 16th, 2019.
Aina Lighting waxay aasaastay Xafiiska Beijing bishii Sebtember 16th, 2019.
Aina Laydhka waxaa la aasaasay sanadkii 2016, ilaa iyo iminkaba waa 6 sano. Dhammaan 6-daan sano, waxaan ku leenahay hal xafiis iib oo ku yaal Shanghai. Maaddaama iibka badan ee aannu hayno, hal xafiis oo iib ahi hore innagama filnayn, sidaa darteed waxaan u dooranay Beijing inay tahay meesha xafiiskeenna labaad.
Xafiiska Beijing wuxuu inta badan diiradda saarayaa Ganacsiga Dhoofinta. Waxay mas'uul ka noqon doontaa dhammaan suuqyada dibedda. Nalalkayagu waxay horeyba u gaareen in ka badan 10 dal sida Filibiin, Thailand, Nigeria, Zambia, France, Austria, UK, Poland, Fiji, Peru, Jamaica iyo Peru.
Ka dib markii xafiiska Beijing la aasaasay, xafiiska Shanghai oo ah xarunteenna dhexe wuxuu ahaan doonaa inta badan suuqa maxalliga ah iyo naqshadeynta nalalka cusub. Xarunta R&D waxaa laga dhisi doonaa Xarunta Shanghai. Iyo xafiiska Shanghai wuxuu noqon doonaa buundada udhaxeysa iibka iyo warshadeena.
Xafiiska Beijing wuxuu ka bilaaban doonaa 5 wakiil oo iib ah. Saddex waaxood ayaa loo dhisi doonaa xafiiska Beijing muddo 2 sano gudahood ah. Saddexdaan waaxood ayaa badiyaa loogu talagalay Wadamada Yurub & Aasiya, Bartamaha & Koonfurta Ameerika suuqyadooda, Afrika & wadamada Oceania. Dad kaladuwan ayaa maamuli doona suuqyo kaladuwan suuqyadana kaladuwan ayaa adeegsan doona siyaabo kaladuwan oo dhiirrigelin ah, si aan u ogaanno suuqyada dibedda si ka wanaagsan sidii hore. Nalalkayagu sidoo kale waa la horumarin doonaa iyadoo lagu saleynayo shuruudaha kala duwan ee suuqyada kala duwan.
Xafiiska Aina Beiijng wuxuu ku yaalaa Changping, oo loogu yeero daaradda dambe ee Beijing. Sidoo kale waxay ku dhowdahay saldhigga tareennada dhulka hoostiisa mara ee khadka Changping, iyo garoonka diyaaradaha ee Beijing taas oo u fudud macaamiisha inay booqdaan.
Qolka bandhiga cusub ayaa dhowaan laga dhisi doonaa xafiiska Beijing, si ay macaamiisha u wada arkaan dhammaan nalalka ku jira xafiiskayaga iibka intaanay soo gaarin warshada. Dhammaan nalalka ay maamusho Aina Lighting ayaa lagu qori doonaa qolka bandhiga ee xafiiska Beijing.
Xafiiska Aina Laydhka Beijing ayaa si dhakhso leh loo horumarin doonaa! Waxaan rajeyneynaa inaan xafiisyo badan ka dhigan karno halkan Shiinaha ama dalal kale dhowaan.